ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းအကျပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာဆရာဟောင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက် အစအဆုံး (အသံ)
လက်ပံတောင်းအကျပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာဆရာဟောင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက် အစအဆုံး (အသံ)
လက်ပံတောင်းအကျပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာဆရာဟောင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက် အစအဆုံး နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ ကိုသိန်းမြတ်က မေးမြန်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီပဲယင်းနဲ့မတူဘူး ဒီပဲယင်းမှာအကြမ်းဖက်သူတွေကစစ်အစိုးရရဲ့ ပုဆိန်ရိုးတွေ ဒေသခံတွေမပါဘူး အခုခံနေရတာကဒေသခံနင်းပြားတွေ
လက်ပန်တောင်းကရတဲ့ငွေနဲ့ စီမံကိန်းပြီးရင်အဲဒီဒေသကို မူရင်း အတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်သလား လူတွေရာစုနဲ့ချီပြီးနေလာခဲ့တဲ့
နေရာကို အပျာက်ခံပြီးလုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုတာမလုပ်ခင်ကတည်းကပြည်သူနဲ့ အကြေ အလည်ဆွေးနွေးပြီးမှလုပ်ရမဲ့ကိစ္စ မလုပ်ခဲ့ဘူး
ငါတို့အာဏာရှိတာပဲဆိုပြီး ဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက်လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တာ နင်းပြားပြည်သူက နာကျည်းတယ်ကွ သံဃာတွေအရှင်လတ်လတ်
မီးရှို့ခံရတာ ကမ္ဘာသိဖြစ်နေချိန်မှာမီးခိုးဗုံးလို့ရှေ့နေလိုက် မုန်လာဥလုပ်ပေးနေရင် ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုအားကိုးရမလဲ
အန်တီစုကို ပြောချင်တာတော့ အငှားဗိုက်နဲ့ ဓါးထိုးမခံပါနဲ့
အခုဆို တပ်ကစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဆရာကြီး အားပါးတရ ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်နေမှာမြင်ယောင်မိသေးတော့
မင်းပြောတဲ့ ဒေသခံနင်းပြားတွေ တကယ်နစ်နာတယ်
ဆိုတာသေချာလား? သူတို့ ပင် ကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆို
ဒီလောက်ထိ ဆန္ဒပြတာတွေ,ပြဿနာ တွေ ထလုပ်မယ်
တောင်ကြီးကို ဖက်ပြီးသေမယ် တို့ဘာတို့ ဆိုတဲ့ စကားတွေ
ပြောရမဲ့ အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကွ။ သူတို့နစ်နာမှုအတွက် လိုအပ်တာတွေ ဆက်ညှိနှိုင်း ထပ်တောင်း ဒီလိုပဲ ဖြစ် ရမယ်
နံပါတ် ၁ က နောက်ကွယ်က ကိုယ်ယောင် ဖျောက်ပြီး
ကြိုးကိုင် နေတဲ့ အဖွဲ့
နံပါတ် ၂. အ ထောက်ပံ့ ရလို့ ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင် ဝင်
လုပ် မြှောက်ပေးတဲ့ နော်အုန်းလှ လို မိန်းမမျိုး
နံပါတ် ၃ . ဒေသခံထဲက ပိုက်ဆံလဲရ နာမည်လဲကြီးတော့
မြှောက်ပေးသမျှ ချီးပဲစားရ စားရ ဆိုတဲ့ မိန်းမ တွေ
ဒါတွေ ကို သေချာ မစုံစမ်းတော့ဘူးလား
တိုင်းပြည်က ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လိုပြန်တည်ရမလဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ... သို့
တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမားလို ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရ ပြီး နိုင်ငံရေးမှအနားယူညည်လုပ်
လိုက်ရင်ရတာပဲ ( အင်း ... ကလေးအတွေးလိုတွေးပီး အကြံပြု ကြည့်တာ)
မင်းပြောနေတဲ့ ပြည်သူဆိုတာ လက်ပန်းတောင်းက လက်တဆုပ်စာလူတွေကိုပြောတာလား? လက်ပံတောင်း
မှာတောင် လူတိုင်း ဆန္ဒပြ ဖင် ပိတ်အော်ဟစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးကွ။ မြှောက်ပေးလို့ဝင် ပါတဲ့လူ,စားပေါက်တွေ့လို့ ဝင် ပါတဲ့လူ တွေပဲ။
ဒေသခံမဟုတ်တဲ့ အ ယောင် ဆောင် လူယုတ်မာ
ပြည်သူ ပြည်သူ နဲ့ မသုံးနဲ့။။။
သေချာပါတယ် ဒေသခံနင်းပြားတွေနစ်နာတယ် အတိုးနဲ့တွက်ရင်တောင်တော်တော်နစ်နာနေပြီ။ဒီလိုအသံတွေမထွက်ခင်ကတည်းက ဘယ်နှစ် နှစ်လောက်ကျိတ်ခံရပြီးပြီလဲမသိပါ။ခုမှ လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဆိုမှအော်ဟစ်ကြည့်ကြတာပါ။သူတို့ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆို ဒီလိုမလုပ်တတ်ပါ။မပြောလည်းဘာမှမပြောတတ်ပါ။ခံစားရတာတွေကိုအဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင်မပြောတတ်ပဲနဲ့ရှေးဘဝကကုသိုလ်ကံမကောင်းခဲ့လို့ဒီဘဝဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ယုံပြီးသေသွားကြမယ့်တောသူတောင် သားတွေပါ Uncle Chan။ပရောဂပါမယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲ။(ဒါကတစ်ပိုင်းသတ်သတ်ရှင်းရဦးမယ်။) တောသားလေ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဘယ်အစိုးရတက်လို့တက်မှန်းမသိလူတွေပါ။
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ပြည်သူတွေကိုပေးတဲ့ကတိကိုအကောင်အ ထည်ဖော်ဖို့အတွက်အလုပ် လုပ်မပြနိုင်ကြရင်(အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ မတတ်နိုင်ပါ အလုပ်လုပ်နေဖို့ပါ) ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ကိုယ်စားလှယ် လစာညာမစားနဲ့။ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးမသုံးနဲ့။မဲခိုးတာရော၊မရှိသုံးသုံးလိုက်ရတာတွေ ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အဟုတ်မှတ်မနေနဲ့။ဘယ်ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတာလဲ။
ဒီနိုငိငံကို အိုဘားမားလာပြီးအုပ်ချုပ် ရင် လဲ အိုဘားမားငိုသွားနိုင် တယ်။ဒီမိုက ရေစီဆိုတာ အလကားနေရင်း စောက်လုပ်မလုပ်ဘဲ ဆန္ဒပြ နေလို့ရတယ်များထင်နေကြလားမသိဘူး။ဒီနိုင် ငံကလူတော်တော်များများက သန်းရွှေနဲ့ဘဲထိုက်တန်တယ်။
နိုင် ငံရေးဆိုတာ အစိုးရလုတ်တာ ဆန့်ကျင် တတ် ရုံနဲ့မရပါဘူး။ မှားတယ် မှန်တယ် ခွဲပြီး အချိန်ကုန်ခံ လို့မဖြစ် ပါဘူး ။ နေရာတကာ သဘာဝပတ် ဝန်း ကျင်ဆို ပြီရန်းတုတ် နေ လို့လည်းမရပါဘူး ။ ကိုယ့် တိုင်းပြည် ရဲ့ လက် ရှိအရှိတရား ကိုလည်း စည်းစား ရမပါ
ဘယ်လိုပြုပြင်နိုင် မလဲ။ ဘယ်လို တည်ဆောက် ကြမလဲ ဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း တွက်တတ်ရပါ မယ်။ နှင့်မိုဆို ရင် မင်းတို့အ ဖေ တွေက ကိုင်းငါမ ပြောဘူးလား ဒီကေင်တွေက လူလိုဆက်ဆန်လို့မရဘူး BULLET ဆာပဲကြွေးကွာ ဆိုပြီး အ မှောင်ထဲပြန် ဝင် ကုန်ပါ့မယ်။
တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို ထင်သလို လုပ် အုပ်ခူပ် သွားတာဗျာ နားလည်ကြစမ်းပါ ဒီလို တောတောင် သယံဇာတ မပြောနဲ့ လူကိုတောင် လူလို ဆက်ဆံမခံရတဲ့ ခေတ်ကသူတို့ စိတ်ကြိုက် လုပ်သွားကြတာကို အခုဒေသခံတွေက ဖေါ်ထုတ်လို့ ကျွှန်တော်တို့ တွန်းလှန်နိုင်နေပြီလေ အခု လူထုခေါင်းဆောင်ကိုတိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကို က ပြည်သူ့ ဘက်က ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲ အဲဒိတောင်ကို ဖြိုပြီး သူ့ တို့ အိပ်ထဲ အကုန်ထည့်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာသေချာနေပြီ အဲဒိဒေသခံတွေကို ပြောချင်တာက ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဖေါ်ထုတ်ကန့် ကွက်မှုအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါတယ် အခု စည်းကမ်းနဲ့ အညီလုပ်တော့မှာဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့ နစ်နာခဲ့တာတွေ ဒေသအတွက် လိုအပ်တာတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်တင်ပြတောင်းဆိုပြီး မိမိတို့ ရဲ့ ဘဝကို အဘက်ဘက်က မြှင့်တင်ကြပါတော့လို့ မေတ္တာ ရပ် အကြံပြုပါရစေ
ခွေးစကားတွေ အလွန် ပြောတတ်တဲ့ Uncle Chan ဆိုတဲ့ ကောင် မင်းကို လက်ပံတောင်း တောင်က တောင်သူ တောင်သားတွေက ဘာတက်လုပ်နေလို့ မင်းအဲလောက်ထိ မကျေမချမ်းနဲ့ လေဖြန်းနေရတာလဲ ခွေးဝဲစားရ။ ငါ့အထင် မင်းပထွေးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို တော်တော်ကြီး လာထိခိုက်နေလို့ မင်းအဲလောက်ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီက တောင်သူတွေက မင်းအမေ မင်းညီမ တွေထက်တော့ အဆပေါင်းများစွာ သာတယ်ကွ ငါ့အထင် မင်းမိသားစုက မိန်းမတွေက ဦးပိုင်နဲ့ တရုတ်ကို ကောင်းကောင်းကြီးပြုစုနေရတဲ့ မိန်းမပျက်တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာပေါ့။ ကျေနပ်လာ ငနွား chan မကျေနပ်ရင် လက်ပံတောင်းလာခဲ့ နဖားကြိုးတက်ပြီး ထယ်ထိုးခိုင်းမယ် ဒါမှမကျေနပ်ရင် မင်းတို့ တအိမ်လုံးခေါ်ခဲ့ တအိမ်လုံးလယ်ထွန်ခိုင်းမယ်ကွား ဟုတ်ပြီလာ။